IGAD oo ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay dhameystirto dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe - iftineducation.com
IGAD oo ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay dhameystirto dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe
aadan21 / February 1, 2016
iftineducation.com – Urur Goboleedka IGAD ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay dhameystirto howlaha maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kaasoo gogoshiisa ay taallo magaalada Jowhar.
Shir Wasiiradda Arrimaha Dibadda IGAD ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa waxaa loogu baaqay Xukuumadda Soomaaliya inay dadaal dheeri ah ku bixiso howlaha maamul u sameynta maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, si shacabka labada gobol ay uga mid noqdaan dowlad goboleedyada hoos-taga dowladda Dhexe.
War si wada jir ah uga soo baxay Golaha Wasiiradda IGAD ayaa loogu baaqay Madaxda dowladda inay xaliyaan muranada ka taagan shirka iyo ergada dhaliilsan sida ay wax u socdaan, isla markaana dhinacyada tabashada qaba lagu qanciyo inay shirka ka qeyb galaan.
Sidoo kale IGAD ayaa ugu baaqday dowladda Federaalka inay sii wado wada hadalada iyo dib u heshiisiinta ay ka dhex wado Maamulka Galmudug iyo Culumaa’udiinka Ahlusuna Wal-jameeca oo khilaaf ka dhaxeeyo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12-kii bishii tagtay ee Janaayo ka furay magaalada Jowhar shirka maamul dhisida ee Labada Gobol Hiiraan iyo Sh/Dhexe, inkastoo bilowgii shirkaas uu wajahay caqabado ka imaanaya beelaha qaar oo qaadacay ka qeyb galka shirka.
Si kastaba ha ahaatee shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa hakad ku jira, iyadoo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay wado qorshayaal lagu xalinayo cabashada ay qabaan beelaha labada gobol, sidii shirka dib loogu ambaqaadi lahaa.
Hoobiyeyaal Dad Rayid Ah Ku Dilay Muqdisho